गगनको बिदाइः श्रीमतीको आँशुदेखि सचिवको ठट्टासम्म
जेठ २१, २०७४ आइतवार २०:३६:०० प्रकाशित
काठमाडौँ- स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बिदाइको हात हल्लाउँदै थिए। उनको त्यो अन्तिम पत्रकार सम्मेलनलाई प्रायः सञ्चार माध्यमले उच्च प्राथमिकता दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हलमा खचाखच हुनेगरी पत्रकार उपस्थित थिए। प्रायः मन्त्रीका कामप्रति आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने पत्रकारले मन्त्री थापालाई सोधेका प्रश्नमा प्रशंसा मिसाए। पत्रकार सम्मेलनभित्र र बाहिर देखिएका केही दृश्य यस्ता छन्।
आगामी मन्त्रीको खाने ठाउँ बन्द
पत्रकार सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै मन्त्रालयमा ‘गगनमाथिको गफ’ उत्कर्षमा थियो। कति कर्मचारी भन्दै थिए, ‘गगनले आउने मन्त्रीलाई समेत खाने–पिउने बाटो बन्द गरिदिए। पहिले जस्तै सोचेर आउने मन्त्री फँस्छ।’
उनको यो गफलाई प्रमाणित गर्ने तर्क थियो, ‘पहिलेका नीति नियममा भएका ‘लुपहोल’ संशोधन गरिदिए। त्यसैले अब सरुवा–बढुवामा पनि खासै ठूलो रकम लेनदेन गर्ने जाँगर हाकिमहरुसँग छैन।’ गफिइरहेका कर्मचारी मध्ये एकले भने, ‘यसपल्ट मन्त्रीले पत्रकारलाई पनि कहाँ–कहाँ हाकिम र मन्त्रीले खाने ठाउँ छन् भनेर देखाइदिए। अब जो मन्त्री भएर आए पनि पत्रकारले र्‍याखर्‍याख्ती पार्नेछन्।’
प्रधानमन्त्रीको उच्च प्रशंसा
प्रायः मन्त्रीले आफूलाई उक्त कुर्सीमा आसिन गराउने आफ्नै पार्टी र पार्टीका उच्च पदस्थ नेताप्रति अनुग्रह प्रकट गर्छन्। मौका मिलेसम्म आफ्नै प्रसंसा गर्छन्। अन्य दलको नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई खुलेर प्रशंसा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कारको विकास नेपालमा अझै भइसकेको छैन।
तर, मन्त्री थापाले माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलेर प्रशंसा गरे। आफूलाई काम गर्न सहयोग गरेको बताउँदै भने, ‘कतिपय समयमा त मेरै प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मात्रै क्याबिनेट बोलाउनुभएको छ। बैठक बसिएको छ।’ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले लगेका प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको खुलासा पनि गरे।
हरेक व्यक्तिको सफलताको पाश्र्व भूमिकामा कसै न कसैको हात हुने स्वीकार गरिन्छ। तर, त्यस्तो भूमिकामा भएको व्यक्तिबारे खुलेर प्रशंसा गर्ने संस्कार हाम्रोमा कमै पाइन्छ। खासगरी यस्तो व्यस्त रहनुपर्ने पदमा बहाल व्यक्तिलाई झन् सफल बनाउन उनीहरुको जीवनसाथीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मन्त्री थापाले जीवनसाथी डा. अञ्जना केसीको पनि कार्यक्रममा खुलेर प्रशंसा गरे।
आफ्नो पेशासँगै घरपरिवार सम्हाल्दै उपयुक्त सल्लाह–सुझावसहित सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिए। मन्त्री थापाले गरेको प्रशंसा पछाडि बसेर सुनिरहेकी डा. अञ्जना भने भावुक भएकी थिइन्। उनीसँगै बसिरहेका चिनजानका व्यक्तिले धाप मारेपछि उनले खुसीको आँशु रोक्न सकिनन्।
पानी ल्याउनेको भूमिका र ‘खलासी’ सचिव
मन्त्री थापाले आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन पानी ल्याइदिने सहयोगीको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताए। मन्त्री थापाकै केही सहयोगीले स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले असहयोग गरेको आरोप लगाइरहँदा थापाले चाहिँ ‘अभिवावकको भूमिका निर्वाह’ गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले भने, ‘झन्डै मेरो उमेर जति स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गरिरहनु भएका सचिवज्यूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। कतिपय निर्णय भावआवेशमा हुन सक्नेमा उहाँले सच्याएर सहयोग गर्नुभएको छ।’
स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय नामक गाडीको आफूलाई खलासीका रुपमा प्रस्तुत गरे। मन्त्रीलाई ड्राइभरका रुपमा अर्थ्याउँदै खलासीले गाडी अप्ठ्यारोतिर जान लागेका बेला ‘ढ्याक–ढ्याक’ पारेर सचेत गराउने काम गर्ने भन्दै उनले ठट्टा गरेका थिए। उनले घुमाउरो रुपमा असहयोग गरेको बताउनेलाई यो उत्तर दिएका थिए। उनको ठट्टाबाट आफूले असहयोग गरेको नभई गलत हुनबाट रोकेको अर्थ निकाल्न सकिन्थ्यो।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनका ९ महिना, यस्ता छन् एक सय ४३ उपलब्धि
स्वास्थ्यमै फर्किने गगनको चाहना, राज्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्ः गगन नै चाहिन्छ